100million – Page 151 – CELE WINGAGAR
ခင်ပွန်းနဲ့ပတ် သက်ပြီး ရင်နဲ့မဆန့်အော င်ခံစားရတဲ့ သူ့ရဲ့ခံစား ချက်တွေကို ဝမ်းနည်းစွာ နဲ့ ဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆုံးပါး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းလေးကို ပရိသတ်တွေလည်း ကြား သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နန်းမြတ်က ခင်ပွန်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူရဲ့ခံစားချက်တွေ ကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့ဆုံးရှူံးမှုကလျှင်မြန်ကြီးမားလွန်းလို့ပြောစရာစက ားလုံးရှာမရအောင်ပါပဲ။ ခုချိန်မှာလဲရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစ ားနေရမယ် […]
ေ၀ဖန္တိုက္ခိုင္ေ နသူေတြကို လစ္လ်ဴရႉ့ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ တ ရားက်င့္ေနၿပီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာျပလာတဲ့ ဂၽြန္လြင္
ခ်စ္လွစြာေသာ ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမာ္ဒယ္တို႔ရဲ႕ မိခင္ႀကီး ဂြ ၽန္လြင္ကေတာ့ အႏုပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဆရာ တစ္ေယာက္လို႔ေတာ့ လူတိုင္းကသိထားၾကပါ တယ္။ ဂြၽန္လြင္ကေတာ့ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာထက္မွာ တစ္ခါတစ္ေ လလည္း ပြဲေတာင္းလြန္းလို႔ သူ႔အတြက္ေဝဖန္ခံ ရမႈဆိုတာကေတာ့ ႐ိုးအီေနပါၿပီ။ ဂြၽန္လြင္ ကေတာ့လက္ရွိျ မန္မာႏိုင္ငံအေရးနဲ႔ပက္သက္လို႔ေတာ့ ပါးစပ္မပါတဲ့လူတစ္ေယာ က္လိုျဖစ္ေနပါၿပီ..။ […]
ခ်စ္သုေ၀ရဲ႕ဖခင္ ဆံုးပါးသြားတဲ့ အတြက္ ၀မ္းနည္ းေၾကကြဲေၾ ာင္း စားေလးေရးသားလာတဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္
ခ်စ္လွစြာေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ လက္ရွိမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိုဗစ္ေရ ာဂါကပ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈေတြကမ်ားျပားလာၿပီးေရာဂါျပင္းထန္မႈေၾကာင့္အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာဆုံးရႈံးေ နရပါတယ္။ ေရာဂါကူးစက္ခံရတဲ့သူေတြထဲမွာဆိုရင္အဆိုေတာ္ ခ်စ္ သုေဝ ရဲ့ဖခင္ႀကီျဖစ္တဲ့ဦးေဇာ္ဝင္းလဲအပါအဝင္ပဲျဖစ္ပါတယ္..။ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔မွာဆိုရင္ေတာ့အဆိုေတာ္ ခ်စ္သုေဝ ရဲ့ဖခင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ဦးေဇာ္ဝင္းက ကိုဗစ္ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးေၾ ကာင့္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိ သားစုမ်ားနဲ႔ထပ္တူဝမ္းနည္ းရပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္သင္းၾကည္ ကလဲခ်စ္သုေဝရဲ့ဖခင္ကြယ္လြန္ […]
မျက်မမြင်များ သာသနာပြုအဖွဲ့ အတွက် စားသောက် ကုန်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ…
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီခန့်စည်သူ ကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း စားသောက်ကုန်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခန့်စည်သူက ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့ မြ န်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်(အင်္ဂလီကန်) မျက်မမြင်များသာသနာပြုအဖွဲ့ ထဲထံသို့စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလီကန်မျက်မမြင်များသာသနာပြုအသင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ အရင်က အကြောပြင်နှင့်အနှိပ်လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေကြသော် လည်း လတ်တလောမှာတော့ […]
ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ပရဟိတ အသင်း ကနေ တဆင့် ပြည်သူ တွေ အတွက် အောက်စီ ဂျင်အိုးတွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်သရုပ်ဆောင် အ ဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ ဒီနေ့မှာ အလှူလေးတစ်ခုကို လှူ ဒါန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ လတ်တလော ကပ် ဘေးကြောင့် အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အောက်စီဂျင်ရရှိဖို့အတွက် အောက်စီဂျင်အိုးတွေကို လှူဒါန်းပေ းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ အောက်စီဂျင်အိုးအလှူလေးကို ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ပရဟိတအသင်းကနေတစ်ဆင့် ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ တာပါ။ […]
ရေမွန်ဆုံးတာ၂လပြည့်တဲ့ အထိန်းအမှတ်အနေ နဲ့ အမှတ်တ ရတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ညီမဖြစ်သူလပြည့်က​ဗျာ….
ရေမွန်ဆုံးတာ၂လပြည့်တဲ့အထိန်းအမှတ်အနေနဲ့အမှတ်တရတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီမလေးဖြစ်သူလပြည့်က​ဗျာ အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့တေးသီချင် ကောင်းများစွာကိုပရိတ်သတ်တွေရဲ့ရင်ထဲရောက်အောင်တီဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိ ထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေမွန်ကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ပြီးလွှတ်မြေ ာက်နယ်မြေသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၂၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကြောင့်လွှတ်မြောက်နယ်မြေမှာပဲရုတ်တရက်ကွယ်လွ န်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်၊မိသားစုမဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်ညီမလေးဖြစ်သူကအဆိုတော်ရေ မွန်ဆုံးတာ၂လပြည့်တဲ့အထိန်းအမှတ်အနေနဲ့အမှတ်တ ရတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားလာ ခဲ့ပါတယ်နော်။ လပြည့်ကဗျာကတော့အစကတော့ဒီနှစ်သူ့မွေးနေ့မှာမေ ာင်နှမပုံလေးထိုးပီးSupriseလုပ်မယ်စဉ်းစားထားတာ ၊မွေးနေ့တွေလဲထပ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ ၂လပြည့်လေ းအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပီးထိုးဖြစ်ခဲ့တယ်၊သတိရတယ်ဘပီ ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာဝမ်းနည်းစွာရေ းသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအ တွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့တေးသီချင်ကောင်းများစွာကို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ရင်ထဲရောက်အောင်တီဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
မွေးရပ်မြေ ပဲခူးမြို့က ပြည်သူ တွေအ တွက် စားသောက် ကုန်တွေ လှူဒါန်း ပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မေကဗျာ….
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော မေကဗျာကတော့ လတ်တလောမှာအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အတူ ကိုယ်ပို င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုပါလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ မေကဗျာကတေ ာ့ အခုကာလမှာ သူ့တတ်နိုင်သလောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို လှူဒါန်းပေးနေခဲ့ပါသေးတယ်။ မနေ့က သြဂုတ်လ (၂၂)ရက်နေ့မှာတော့ ကဗျာက သူရဲ့ မွေးရပ် မြေဖြစ်တဲ့ ပဲခူးမြို့က စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကု […]
« 1 … 150 151 152 … 203 »